अनियमितता भएकाे थाह पाउनुभयाे भने मेयर मात्र हाेइन जीवनभर राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु - भीम पराजुली - Purbeli News
अनियमितता भएकाे थाह पाउनुभयाे भने मेयर मात्र हाेइन जीवनभर राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु – भीम पराजुली
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन २४, २०७७ समय: २०:३८:२८
देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । प्रदेश नं १ का बिभिन्न जिल्लाहरूमा पनि संक्रमण तिव्ररूपमा फैलिरहेको छ । त्यसमा पनि प्रदेश नं. १ काे राजधानी विराटनगरमा एक ताका संक्रमणको केन्द्र नै बनेको थियो । पहिलो चरणको लकडाउन सकिएर जनजिवन समान्य हुनै लाग्दा विराटनगरमा संक्रमण तिव्ररूपमा फैलिएकाे थियो । साे बेला विराटनगर महानगरपालिकाले दोस्रो चरणको लकडाउनकाे घोषण गरेको थियो । यस क्रममा महानगरले निजि क्षेत्रको पहलमा पिसिआर मेसिन खरिद समेत गरेको थियो । यसै परिवेसमा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीसंग काेविड १९ काे महामारीकाे अवस्थामा नगरकाे वर्तमान गतिविधि ,भावी याेजना तथा समसामयिक विषयवस्तुकाे वारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मेयर साब ! कोरोना कहरमा विराटनगर महानगरपालिकाले के कसरी काम गरिरहेको छ ? राेग नियन्त्रण तथा राेगथामका लागि के के कामहरु भएका छन् ।
चिनकाे वुहान शहरबाट कोरोना सुरू भए पछि हामीले सतर्कता अपनाएका थियौँ । संघिय सरकारले भन्दा हामीले पहिले लकडाउनको घोषण गरेका थियौँ । स्वास्थ्यकार्मिलाई जोखिक भत्ताको व्यवस्था, सिमानामा हेल्प डेक्स संचालन लगाएतका काम शुरू कै दिनमा गरेका थियौँ । यदपि समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिए पछि फेरी दोस्रो चरणको लकडाउन गर्नु पर्यो । पर्याप्त अस्पताल नभएकाले यो बिचमा हामीले अस्पतालको तथा आइसुलेसनको व्यवस्थापन गर्यौ । स्थानिय व्यावसायीको पहलमा पिसिआर मेसिनको खरिद गरेका थियौँ । जसमा मैले पनि तलब भत्ताबाट ५ लाख सहयोग गरे ।
यति हुदाहुदै पनि महानगरपालिकाले राम्रो काम नगरेर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काेराेना नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएकाे भन्ने कतिपयकाे गुनासाे छ नि ?
विराटनगर महानगरपालिकाले जति सबैले गरेको भए देशमा यो भयाबह अवस्था नै आउँदैन् थियो । अरू जिल्लामा संक्रमण फैलिरहेका समयमा र विराटनगरमा पनि समुदायमा संक्रमण देखिएको समयमा दोस्रो पटककाे लकडाउन, निषेधाज्ञ नगरेको भए, परिक्षणको दायर नबढाको भए, मेसिन खरिद नगरेको भए र निजि अस्पताल सँग समन्वय नगरेको भए अहिलेकाे अवस्थामा झन अत्यान्तै जटिल हुने थियो । विराटनगरले के के गर्यो र अरूले के के गरे भनेर हेर्नु भयो भने सबै प्रष्ट हुन्छ ।
तपाईहरू निर्वाचित भएर आए पछि जनताले महसुस गर्न लायक काम के के गर्नु भयो ?
हामीले पहिलो कुरा शुसासनमा जोड दियौँ । सुसासन नै समृद्धिको आधार पनि हो । यसको सुरूवाल नेतृत्वबाट गर्नु पर्छ भन्ने म अनिमियना नगर्नेमा प्रष्ट छु । यदि कतैबाट त्यस्ताे गरेकाे प्रमाणित भयो भने सारा जीवन भर राजनितिबाट सन्यास लिन्छु । मैले गलत काम गर्ने निमार्ण व्यासायीलाइ कारवाहीको दयारमा ल्याउन पहल गरेको छु । गलत काम गर्ने कर्मचारीलाइ अख्तियारको जिम्मा पनि लगाएका छौ । त्यसैगरी मैले आफ्नो ५ बर्षको सेवा सुबिधा लिएको छैन । २ बर्षको विद्यालयलाई दिएको छु । तेसै गरि १ बर्षको राहत कोषमा र यो बर्षको पिसिआर मेसिन खरिमा दिएको छु । हामी भौतिक पुर्वधार निर्माणमा पनि अगाडी छौँ । विराटनगर बस टर्मिनल तोकिएको समय भन्दा अगाडी सकेर नेपाल सरकारले पुरस्कृत गरेको अवस्था छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको काम गरेका छौँ ।
महानगरको आगामी योजना के कस्ता रहेका छन् ?
अगामी समयमा विराटनगरलाई हामी कुन रुपमा देख्न पाउँछौं । विराटनगर महानगरपालिकालाई एउटा स्वच्छ हराभरा शान्त, सफा अाधुनिक शहर बनाउने प्रयासका साथ काम गरिरहेका छौँ । विराटनगरको महत्व र गरिमालाई अझ बढाउनु पर्छ । महानगरले मात्र चाहेर हुने हैन् । संघिय र प्रदेश सरकारको सहयोग महत्वपुर्ण हुन्छ । नगारिक तथा सरोकारवालाहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । विराटनगरले भौतिक पूर्वाधारलाई प्रथमिक्ता दिएको छ । अहिले विभिन्न संरचना निर्माण भइरहेका छन् । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छाै । नमुना विद्यालय घोषण गरेका छौँ । प्रत्येक वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि काम भइरहेको छ ।
विराटनगर महानगरकाे अहिलेकाे समस्या र समाधानका उपाय के के हुन सक्छन् ?
२० बर्ष देखि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था थियो । वास्तवमा विराटनगरले धेरै कुरा पाएको भए पनि विकास निर्माणमा पछाडी थियो । अहिलेकाे अवस्थामा बिकासको नेतृत्व हामीले गरेका छौँ । विराटनगरलाई प्रदेश र संघिय सरकारले राम्रोसँग हेरेको भए अहिले विराटनगर अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यो । अहिले विभिन्न प्रोजेक्टहरू अगाडी बढेका छन् । यदि अन्तरिक स्रोताबाट पनि बिभिन्न काम भइरहेका छन् । कोरोना नभएकाे भए विराटनगर अहिले निकैप अगाडी हुने थियो । अब विराटनगरकोलाई साचै विराटनगर बनाउन स्रोतको समस्या छ । आन्तरिक स्रोत कमि छ । संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट जुन हिसाबले स्रोत तथा बजेट आउनु पर्ने हो त्यो हिसाबले नआउँदा अत्यत्तै चुनौति छ ।
भीम पराजुली विराटनगर महानगरपालिका